जब दिनको शुरुवात एक कप चियाबाट गर्ने वानी परेको छ भने तपाईको लागि अदुवा चिया निकै फाइदाजनक हुनेछ । अदुवा हालेको चिया स्वादका साथ स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
अदुवाको चिया पिउदा पाचक क्रियामा सुधानर आउनेछ । धेरै खाना खादा अदुवाले पचाउन सहायता गर्छ ।
अदुवाको चियाले पेटको समस्या समेत कम हुन्छ । पेटमा भएको जलनसमेत हट्छ ।
यसमा भएको भिटामिन, मिनरल्स तथा अमीनो एसिडले रगत प्रवाहलाई राम्रो बनाउछ ।
अदुवाको चियाले शरीरको सवै विकारलाई बाहिर निकाल्छ भने छाला समेत सफा हुन्छ भने अनुहारमा समेत चमक आउँछ ।
मानसिक तनावलाई कमी गर्न पनि अदुवा चियाले फाइदा पुग्छ ।
महिलामा मासिक धर्मको समस्या छ भने अदुवाका चिया पिउदा त्यसले फाइदा पुग्छ ।
अदुवाको चियामा कागती मिसएर पिउदा शरीरको वजनसमेत कम हुन्छ ।
समानुपातिक तर्फको मतगणना सम्पन्न, कांग्रेस भन्दा एमालेलाई ४५ हजार बढी भोट
अनुहारमा काला दागहरू आयो ? यो विधि प्रयोग गरी सजिलै हटाउनुस्
अनुहारमा काला दागहरू आएर हैरान हुनुहुन्छ ? वा अनावश्यक चिल्लोपना भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यहाँ ५ तरिकाको प्रयोगबारे चर्चा गरिएको छ । जसको प्रयोग गरी सहजै त्यस्ता दागहरू हटाउन सकिनेछ ।&nbs...